Trump: Dagaal ma Dooneyn – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Trump: Dagaal ma Dooneyn
Trump: Dagaal ma Dooneyn
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa Talaadadii shalay sheegay in Maraykanku aanu dooneynin in dal kale uu khilaaf dhex maro, isla markaana aanu ka laba labeyeyn doonin in uu danaha Maraykanka difaaco.
Trump oo ku sugan qol ay ka buuxaan hogaamiyeyaasha caalamku ayaa yiri “Dawladda Maraykanka, ka dib markii aan 2.5 trillion oo dollar ku bixiyey did u dhiska ciidan wey, kaas oo ah ka dunida ugu xoogga weyn, waxaan rajeynayaa in awooddaas aanan marnaba adeegsan.”
Trump ayaa carrabka ku adkeeyey in aanu dooneynin in uu dal kale dagaal la galo.
Golaha Guud ee QM ayuu ka sheegay oo yiri “Waxaan dooneynaa nabad, iskaashi, iyo inaan wada macaashno, hase yeeshee, waligay kama gaabinayo in aan danaha Maraykanka difaaco.”
Previous articleSaudi Arabia “important decision” against foreign workers
Next articleQarax bambaano ayaa lala beegsaday bas booliis koonfurta dalka Turkiga